Imincintiswano yokupheka yangempela ikhonza ezinye zeendlela ezibonakalayo kwiTV. Ufumana uvuyo lokubukela abapheki bemfazwe kunye (kunye nayo yonke i-backstabbing, egomania kunye ne-melt-downs ehamba nayo) kwaye ufumana ukufumana izisombululo zabo ezintsha kwiingxaki. Ngaphezulu iimveliso zabo zokugqibela zincinci kakhulu kunomnye ukuqokelela.
Nazi iindlela ezihlanu eziphambili zokupheka kwiTV:
UDavid Moir / Bravo
Ukususela ngo-2006, i-Bravo iye yabangela abaphengululi abaninzi bekhuphisana ngokunyanelana kwimingeni evanya uvavanyo lwabo lwezolimo kunye nobuchule. Abagwebi abathathu abaneembala kunye nemingeni ekhethekileyo benza ukuba umboniso uphumelele.
Isiqendu ngasinye sibonisa umngeni wokukhawuleza nokuqeda. Umthandi ozithandayo yiWars Wars, umngeni wokuphelisa apho amaqela amabini azisa ii-pop-up zokutyela. Abaphezulu abapheki abathathu bexesha liza kukhuphisana kwixesha lokugqibela ukuze bazuze i $ 200,000 (ngaphambili i-$ 100,000) kunye nomxholo wokuhlela kwi- Food & Wine Magazine .
Ngoxa i- Top Chef igxile kwi-chefs, i- Chefs ye- MasterChef iFox iquka abapheki be-amateur nabasekhaya. Iikhiphe ezilikhulu zipheka isitya sayo sisayinwa kodwa ezilishumi elinesine kuphela ziya kukhuphisana. Abaqhubi bezemidlalo kufuneka bahlangabezane nemingeni efana nokupheka kunye nezithako ezingaqhelekanga kunye nokufumana izitya ezingavamile. Abagwebi ungumnini weedini uJoe Bastianich; Umpheki uGraham Ellio kunye nomntu onomusa, umkhandi weHolen's Kitchen chef Gordon Ramsay.
Ukuba uthanda ukucinga njengompheki-mhlaba owaziwayo uGordon Ramsay njengomcebisi onokuqinileyo kodwa onothando onobubele babazali, jonga i- MasterChef . Ukuba ukhetha ukubheka i-acidic, i-rampay-spewing i-Ramsay ibeka abaphengululi abafuna ukuphengulula iimingeni ezingenakuqhathaniswa kwaye ke banokunyaniseka ngokunyanisekileyo ekuhloleni iimpazamo zabo-kwaye xa ndithi 'inyaniso' ndiyithetha 'inonakalisa' kuwe. Kukho isizathu sokuba ndibekwe kwi- MasterChef ephakamileyo: Ndidiniwe ngetyala lokuthetha kakubi oludlulayo. Sekunjalo, kukho into engaqinisekiyo yokunyanzelisa ngokuncintisana nokupheka kweFox okanye ayiyi kuphila ixesha elide.
'I-Chef elandelayo yensimbi
I-Chef elandelayo ye-Iron Chef i-spin-off ye-Food Network ye- Iron Chef America kwaye ithumela abapheki abaphumeleleyo abayishumi kwimingeni yokutya kwiindawo ezijikeleze ihlabathi. Isiphelo siqhubela phambili abadlali abancinci bebambisene nomnye kwi-Food Network ye-Kitchen Stadium, apho i-winner ibhengezwa yiNtloko ye-Iron kunye kwaye iyakwazi ukukhuphisana kwi- Iron Chef America .
I- Eye Eye Queer ye-Guy yoLungelelululo lwezoLimo, u-Ted Allen, ubamba lo khuphiswano lokupheka lokutya, apho abapheki bebancintisana ngokupheka ukutya okuthathu. I-twist-ukuba nganye ikhosi kufuneka ifake izithako ezivela kwibhokisi ye-mystery-ikhokelela ekudalweni okonwabisayo njengoko abapheki bezama ukubandakanya izinto ezifana ne-Crackers zezilwanyana kunye nolwandle. Kodwa kwakhona i-batch entsha yokupheka ibambisana nesicaciso ngasinye, ngoko ababukeli abanakho ithuba lokuzifumana okanye impande kwiintandokazi ngexesha elipheleleyo.
UkuHlonipheka okuThethayo: Ukuhlawula
Njengaye uninzi lwee-movie, ama-spin-offs ayenako ukuphumelela ukubuyisela imilingo yabo ngaphambili. Kodwa kukho abambalwa abaye bakwazi ukubetha iingxaki. Nazi izinto ezintathu zokuncintisana ukupheka ukhuphiswano njengoko kuthatha inxaxheba njengemiboniso eyabangela ukuba:
I-Chef ephezulu: I-Desserts nje : I-spin-off-off off from Top Chef - Kwixesha elithile emva kwenkathi, abaphephe bahlulwa ngamacwecwe angaphumeleli - olu khuphiswano lulandela abapheki beefeshi abahambisa izidalwa zokunisela umlomo.
I-Iron Chef yaseMerika : Ngokuqinisekileyo, i-Food Network ye- Iron Chef yaseMelika yazala i- Next Iron Chef , kodwa ngaphambi koko, yayisisigxina se-original yaseJapan. Iquka ukupheka phakathi kwamanye abapheki abakhulu eMelika, kuquka uCat Cora noBobby Flay.
I-Top Chef Masters : Ngokufanayo, le nkqubela ephezulu i- Star Chef izazi zeenkwenkwezi eziyaziwayo emhlabeni jikelele. Iveki nganye iincinci zincintisana, kwaye enye iyaqedwa kuze kube sekupheleni apho abapheki abasalayo banokupheka i-prize ye-$ 100,000 (eyinikelwa ukuthanda kwabo).
Umbono wamaSulumane wamaYuda
Ezili-10 zezona zeSayithi zeSoka
IJografi yeRiphabhliki ye-21 yaseRashiya
I-Modern Essay nguVirginia Woolf